Izintambo ezingezona ezejwayelekile Ukuhlanganiswa Okubi - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Izintambo ezingezona ezejwayelekile Ukugcoba okuncane
Izinga elijwayelekile elibhekele ukulimala kokuqala
Okokuqala, ukufaka okungalungile (cishe ngo-16%)
1, ukufakwa kwamandla okuhlukumezeka, ngesando ngokushaya ngqo ukubheja okungajwayelekile okungekho okujwayelekile okulimaza kakhulu; yiyona imbangela enkulu yezinguquko.
2, ukufakwa akusekho, ukufakwa kokuphambuka noma ukungeniswa kwi-non-standard bearing position, okuholela ekunikezeni imvume yokugcina okungavamile okuncane kakhulu. Indandatho yangaphandle nangaphandle ayikho esikhungweni esifanayo sokujikeleza, okuholela enhliziyweni ehlukile.
Incomo: Khetha amathuluzi okufaka afanelekayo noma ajwayelekile angenawo ajwayelekile, ukufakwa ukusebenzisa ithuluzi elizinikezele ukuthola.
Okwesibili, ukugcoba okungalungile (cishe ama-50%)
Ukugcoba okuncane kungenye yezimbangela eziyinhloko zokuhluleka ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kwezintambo ezingajwayelekile. Izizathu eziyinhloko zibandakanya: hhayi ukugcwalisa izigcoli noma amatshe okugcoba ngesikhathi esifanele; Amafutha noma amafutha akugcini endaweni; ukukhethwa okungalungile kwezinto zokugcoba noma zokugcoba; Ukushiswa kwe-lubrication akulungile futhi njalo.
Incomo: Khetha i-lubricant noma i-lubricant elungile, usebenzisa indlela efanele yokugcwalisa i-lubrication.
Okwesithathu, ukungcola (cishe ngo-14%)
Ukungcoliswa kuyoholela ekulimaleni okungakapheli emithwaleni engavamile, ukungcola uthuli, izinsimbi zensimbi ezingenawo ama-bearings angaphakathi. Izizathu eziyinhloko zihlanganisa: ukusetshenziswa kwasekuseni kakhulu ukuze kuvulwe ukufakelwa okungejwayelekile, okwenza kube nokungcola; ukufakwa kwendawo yokusebenza akuhlanzekile, okubangelwa ukungcola; imvelo engeyona ejwayelekile yokusebenza imvelo ayihlanzekile, isebenzi lokungcoliswa kwezindaba.
Incomo: Ngaphambi kokusebenzisa okusemandleni okungavuli ukufaka amaphakheji okungajwayelekile; ukufakwa ukuze kugcinwe imvelo yokufaka ihlanzekile, isetshenziselwe ukuhlanza amabhethri angajwayelekile; uphawu olunamaphutha olungenayo ejwayelekile. Njengamanje, umnotho waseChina uyaqhubeka nokuthuthuka okusheshayo futhi okusheshayo, imboni ephetheyo nayo ihlale inqobe ubunzima, ukuqonda imakethe yasekhaya, ukuthembela emotweni, isitimela esisheshayo, ukuthuthwa kwemikhumbi, ukukhiqizwa okuthuthukisiwe, IT kanye nemishini yamandla nezinye izinto ezikhulayo ezikhulayo izimboni, Ukuguqulwa njengesihluthulelo, ukulungisa ngokungahleliwe isakhiwo somkhiqizo, kodwa nasekubhekaneni nokukhiqiza imboni ukufeza umkhuba oqhubekayo.
Ukuthengiswa kwemikhiqizo ye-China, okuyi-tonnage enkulu kunazo zonke, kodwa inani elingeziwe liphansi kakhulu, ngakho qiniseka ukuthi ukuthekelisa imikhiqizo kokuqukethwe kobuchwepheshe bemizamo ye-value-added. Ngemuva kweminyaka eminingana yokuvuselelwa kwezimboni, ukulungiswa kabusha nokuhlelwa kabusha, ukuthuthukiswa kwemikhiqizo ethintekayo kwamanye amazwe ukuze kuthuswe. Njengamanje, imvelo yokuthuthukiswa kwemboni yaseChina iqhubeka nezinguquko ezijulile, ukuqoqwa kwesikhathi eside kokuphikisana okujulile kuyaqhubeka kuvelele, imodeli enkulu yokukhula engaqiniseki, ingene ekuguqulweni nasekuthuthukiseni ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwezimboni nokushesha kwesigaba esisha. Ukuguqulwa ukushintsha imodi yokuthuthukiswa, ukukhula okuqhubekayo, ukukhula okungapheliyo, okunamandla nokusebenza kahle, okuncane okwenziwe yi-carbon-carbon, ukuguqulwa kwezidingo ezivela ekhaya; ukuthuthukiswa ukuthuthukisa ngokugcwele isakhiwo semboni, isakhiwo senhlangano, isakhiwo sezobuchwepheshe, isakhiwo somkhiqizo, isakhiwo sokuhlela, ukugqugquzela isakhiwo sebhizinisi jikelele Ukuthuthukisa ukukhuthazwa. Ngokuguqulwa nokuthuthukiswa, ukusheshisa ukugcwaliseka komgwaqo kusukela ekuthuthukisweni kwendabuko komgwaqo kuya ekutheni uhlobo olusha lokuthuthukiswa kwemboni, kuthuthukise ukuncintisana komkhakha wezokukhiqiza waseChina nokuthuthukiswa okusimeme, ukufeza intuthuko yesayensi.